Makedonia tsy voafetran’ny fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2008 22:17 GMT
Ity lahatsary ity dia nosoratana sy notontosain'i Milcho Manchevski (efa tafiditra hifaninana tao amin'ny Academy Award ny taona 1995), ary ny tanjona amin'izany diany hampiroboroboana ny fizahantany mankany Makedonia. Halefa ao amin'ny CNN ity lahatsary ity, sy any amin'ny firenena hafa ampolony sady havoaka amin'ny fiteny valo samihafa. Misy moa ny vohikala manokana www.macedonia-timeless.com, voatondro ho mpanohana (fanampin’)ity dokambarotra ity.
Ao ambanin'ny fanomezan-dalan'ny Creative Commons license Attribution – No derivative works 2.5 Macedonia, ity lahatsary ity ka io fanomezan-dalana io dia mamela ny mpampiasa azy hisintona sy hamoaka ihany koa ny lahatsary any amin'ny vohikala hafa. Makedonia no iray amin'ny firenena vitsy mampiditra ny Creative Commons license ho fanaovana fampiroboroboana an-tserasera, na dia maro aza ny firenena mampiasa ny TV miampita avy amin'ny zanabolana hanaovana dokambarotra.
Fotoana fohy monja dia ity lahatsary ity no vaovaon'ny andro, ary maro ny mpamaham-bolongana no namoaka azy tami'ny bolongany sady namoaka ny heviny momba ny fampiroboroboana sy ilay vohikala [mkd]. Na dia mankasitraka aza ny hevitra hita ao amin'ny YouTube, dia maro ny mpamaham-bolongana no kivy ihany tamin'ilay lahatsary, indrindra moa rehefa hitan-dryzareo ny vola lany tamin'ny fanatontosana azy (190,000 Euros)
Vao natolotra [mkd] ilay lahatsary tao amin'ny Kajmak.ot, dia maro no nilaza ny heviny momba azy. Misy nanoratra hoe:
The Arheoblog nambosaka [mkd] tao amin'ny lahatsorany ny ny toe-draharaha miaraka amin'ny fidiran'ny fizahantany any Makedonia, naka aingam-panahy avy tamin'ny lahatsary:
Zoro hafa kosa no hanehoan-dRazvigor ny heviny [mkd] amin'ilay lahatsary:
Ny tena zava-dehibe amiko aloha dia ny namoahana ity lahatsary ity ho eo ambanin'ny lalànan'ny Creative Commons license.
04 Desambra 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana
15 Novambra 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana